Momba anay - Weldsmt Machinery Co, Ltd.
Masinina SMT Pick & Place
Milina LED & Plateurs
Masinina SMT nampiasaina
Fitaovana Peripheral SMT
Mamatsy milina fanoratana taratasy
SHENZHEN WELDSMT MACHINERY CO., LTD dia mpamatsy matihanina amin'ny fitaovana SMT maimaim-poana amin'ny tontolo iainana, miavaka amin'ny famokarana sy ny varotra milina famolavolana mandoko maimaim-poana, milina famandrihana ny onja tsy misy firy, milina fametahana automatique vita amin'ny taratasy, robots indostrialy ary hafa Fitaovana automated. Manome vahaolana avoakan'ny famandrihana SMT feno sy ireo vokatra teknolojia plug-in AI manohana ny tolotra, miezaka ny ho tonga orinasa tsara indrindra amin'ny resaka famokarana kalitao sy laza momba ny serivisy.
Weldsmt dia manana departemanta fikarohana momba ny fikarohana sy ny fampandrosoana momba ny injeniera, departemanta CNC, departemanta amin'ny fizahan-tany vita amin'ny taratasy sy ny departemanta fivorian'ny fivoriambe.
Miaraka amin'ny traikefa momba ny fampandrosoana ny rindrambaiko sy ny hardware, mihoatra ny 10 taona, ny ekipantsika R&D dia mahomby sy mahaleo tena mikaroka sy mamolavola ny fitaovana mekanika, fitaovana elektrika, rindrambaiko fandidiana, rafitra fanaraha-maso indostria sns .. Ankoatra izany, Weldsmt dia orinasa avo lenta amin'ny sehatra teknolojia ho toy ny vokatry ny fananana maro an'isa famoronana sy mari-pahaizana an-tahiry, fanamarinana ISO9001.
Amin'ny maha-orinasa teknolojia voalohany, ny fanavaozana mahaleo tena no tena iankinanay. Mino izahay fa ny R&D haingana sy ny fampiharana ny teknolojia avo lenta no fototry ny fampandrosoana maharitra ny orinasa.